စိန်ခေါ်တယ် – Android Cheats သိကောင်းစရာများ
Tag မော်ကွန်းတိုက်: စိန်ခေါ်တယ်
🔴 မီးနီ, မီးစိမ်းလား ဒါမှမဟုတ် မင်းသေလိမ့်မယ်။! S-quid Survival Challenge မှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်။ – 3ဒါလည်း တိုက်ပွဲ – နာမည်ကြီး K-ဒရာမာကို အခြေခံထားသည့် ရှင်သန်ခြင်းဂိမ်းတွင် စိတ်လှုပ်ရှားစရာအကောင်းဆုံးစိန်ခေါ်မှုများ. Squid Survival ဂိမ်းတွင်, ပင်မဇာတ်ကောင်နံပါတ်အဖြစ် သင်ပါဝင်မည်ဖြစ်သည်။ 456, ရှင်သန်ရန် အမျိုးမျိုးသော သေခြင်းဂိမ်းများကို ကျော်ဖြတ်ပြီး ကြီးမားသောဆုများကို ရယူရန် ကြိုးစားနေပါသည်။. ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့… ပိုပြီးဖတ်ပါ »
အမျိုးအစား: cheat နှင့် Hack သို့မဟုတ်သိကောင်းစရာများ အမှတ်အသားများ (Tags): စိန်ခေါ်တယ်, မင်္ဂလာပါ, ဂိမ်း, ရေဘဝဲ, ရှင်သန်မှု
K-Sniper Survival စိန်ခေါ်မှု – လှိုင်သာယာ&Hack
သင်၏စနိုက်ပါနယ်ပယ်မှတဆင့် မအောင်မြင်သောကစားသမားများကို ပစ်မှတ်ထားပြီး အကောင်းဆုံးရိုက်ချက်ပြုလုပ်ပါ။!သင်၏သတ္တုကိုသက်သေပြရန်နှင့်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကောင်းဆုံးရိုက်ချက်ဖြစ်လာရန် Sniper Challenge ကိုပူးပေါင်းပါ။. ရှင်သန်ဖို့အတွက် တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ ကစားသမားရဲ့ အခန်းကဏ္ဍကို သင် ငြီးငွေ့နေပါသလား။? သေခြင်းတရားနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ပြီး ကွပ်မျက်သူနဲ့ ရာထူးကို လဲလှယ်ချင်ကြပါတယ်။ ပိုပြီးဖတ်ပါ »
အမျိုးအစား: cheat နှင့် Hack သို့မဟုတ်သိကောင်းစရာများ အမှတ်အသားများ (Tags): စိန်ခေါ်တယ်, မင်္ဂလာပါ, KSniper, ရှင်သန်မှု
456 Sniper စိန်ခေါ်မှု – လှိုင်သာယာ&Hack
ရည်မှန်းချက်, ပစ်, ထပ်လုပ်ပါ။. အမိန့်အတိုင်း မအောင်မြင်သော ကစားသမားအားလုံးကို ဖယ်ရှားပါ။ 456 Sniper စိန်ခေါ်မှု! အစားများ၏။ 456 survival ဂိမ်းတွင်ကစားသမားများ, ယခုသင်သည် အခန်းကဏ္ဍကိုပြောင်းပြီး စီရင်ချက်ချသူဖြစ်လာသည်။. ပကတိအာရုံစူးစိုက်မှု, အမြန်တုံ့ပြန်မှု, သင်၏မစ်ရှင်ကိုပြီးမြောက်ရန် ထက်မြက်သောပစ်ခတ်မှုစွမ်းရည်များ လိုအပ်ပါသည်။. အင်္ဂါရပ်များ:– စိန်ခေါ်မှုများစွာသော နေရာများနှင့် အခြေအနေများ–… ပိုပြီးဖတ်ပါ »
အမျိုးအစား: cheat နှင့် Hack သို့မဟုတ်သိကောင်းစရာများ အမှတ်အသားများ (Tags): စိန်ခေါ်တယ်, မင်္ဂလာပါ, Sniper
ရှင်သန်ခြင်းဂိမ်း: Squid စိန်ခေါ်မှု – လှိုင်သာယာ&Hack
ဤဂိမ်းများကိုစိန်ခေါ်ရန် အသင့်ပြင်ထားပါ။:– မီးနီ မီးစိမ်း– သကြားလုံးထွင်းခြင်း။– လွန်ဆွဲ– မှန်တံတား– စကျင်ကျောက် ကစားကွင်း– Ddakji Paper flip မင်းဟာ အကြွေးအများကြီးတင်ပြီး ရှင်သန်ဖို့ ကစားကွင်းထဲကို ပစ်ချလိုက်ပြီး ပိုက်ဆံတွေအများကြီးရခဲ့တယ်. squid အမျိုးအစားတွင် မတူညီသော စိန်ခေါ်မှုများနှင့် သေခြင်းတရားရင်ဆိုင်နေရသော ဂိမ်းများစွာကို ဖြတ်ကျော်၍ ကစားပါ။ ပိုပြီးဖတ်ပါ »
Candy Cup စိန်ခေါ်မှု – လှိုင်သာယာ&Hack
Hunger Games ပုံစံပြိုင်ပွဲအတွက် စုဆောင်းခံရသူ ရာနှင့်ချီသော ငွေသားထုပ်ပိုးထားသော ပုဂ္ဂိုလ်များကို လိုက်လံကြည့်ရှုသည်။. ပြိုင်ပွဲက အစမှာ အပြစ်ကင်းတဲ့ပုံပေါ်ပါတယ်။, နာမည်ကြီးကလေးများနှင့်အတူ’ စိန်ခေါ်မှုများစွာ၏ဗဟိုတွင်ဂိမ်းများ, သူတို့သည် လျင်မြန်စွာ သေစေကြောင်း သက်သေပြခဲ့သည်။. သေစေလောက်သောပွဲများကို အနိုင်ရသောသူသည် ဂိုးသွင်းမည်ဖြစ်သည်။ 4-5-6 ငွေသားတစ်သန်းဆု, ဒါပေမယ့် သူတို့အရင်ဆုံး အသက်ရှင်ရမယ်။. သူတို့နိုင်သည်… ပိုပြီးဖတ်ပါ »
အမျိုးအစား: cheat နှင့် Hack သို့မဟုတ်သိကောင်းစရာများ အမှတ်အသားများ (Tags): သကြားလုံး, စိန်ခေါ်တယ်, မင်္ဂလာပါ, Cup
စိန်ခေါ်မှုဂိမ်း 3D : ပါတီဂိမ်း လှည့်စားမှုများ&Hack
Challenge Survival 3D ဂိမ်းမှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်။, ဆုပေးပွဲအတွက် တိုက်ပွဲဝင်နိုင်ပြီး ပါဝင်ခြင်း ရှိ၊မရှိသည် သင်၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်သည်ကို သတိရပါ။… မင်းရဲ့အသင်းဖော်တွေကို ပိုက်ဆံအတွက် သစ္စာဖောက်မှာလား ဒါမှမဟုတ် အနိုင်ရဖို့အတွက် သူတို့ကိုသတ်ပစ်မှာလား။? ရှုံးရင်, မင်းသေပြီ. မကြာခင် အသတ်မခံပါနဲ့။! ဖယ်ရှားခြင်းဆိုသည်မှာ... ပိုပြီးဖတ်ပါ »
အမျိုးအစား: cheat နှင့် Hack သို့မဟုတ်သိကောင်းစရာများ အမှတ်အသားများ (Tags): စိန်ခေါ်တယ်, မင်္ဂလာပါ, ဂိမ်း, Party
ရေဘဝဲဂိမ်းများ: K Challenge 456 လှိုင်သာယာ&Hack
ရေဘဝဲဂိမ်းများ – K Challenge 456 ကျွန်တော်တို့အားလုံးမှာ အရင်တုန်းက ကစားခဲ့တဲ့ ငယ်ဘဝဂိမ်းတွေရှိတယ်။. သင်မှတ်မိပါသလား: မီးနီ မီးစိမ်း, သကြားလုံး ခွဲခြားမှု, ကြိုးကိုဆွဲပါ။, အတက်နှင့်အကျ … အခု, ဂိမ်းအားလုံးကို မိုဘိုင်းသို့ ယူဆောင်လာသည်။. ဒီဂိမ်းထဲမှာ, ရှင်သန်နိုင်သော ဂိမ်းကြီးဖြစ်သော Octopus Game တွင် သင်ပါဝင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ – K… ပိုပြီးဖတ်ပါ »
အမျိုးအစား: cheat နှင့် Hack သို့မဟုတ်သိကောင်းစရာများ အမှတ်အသားများ (Tags): စိန်ခေါ်တယ်, မင်္ဂလာပါ, ဂိမ်းများ, Octopus
Green Light စိန်ခေါ်မှု – Doll Game Survival သည် စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းပြီး စွဲမက်ဖွယ်ကောင်းသော 3D ရိုးရာ Simulator K ဖြစ်သည်။- ငယ်စဉ်က နာမည်ကြီး ကိုရီးယားဂိမ်းများကို အခြေခံထားသော ဂိမ်းများ, ဤဂိမ်းသည် သင့်အား အဓိကဇာတ်ကောင်၏ လက်တွေ့အကျဆုံးအတွေ့အကြုံကို ယူဆောင်လာမည်ဟု ကတိပြုပါသည်။ – ဘာညာ 456. အခြားပြိုင်ဘက်များကို အနိုင်ယူပြီး အောင်နိုင်သူသာ ဖြစ်ပါစေ။ 45.6$ ဘီလီယံပေါင်းများစွာ… ပိုပြီးဖတ်ပါ »
အထိ 456 ကစားသူများသည် Squid Game မှကြိုဆိုပါသည်။. မီးနီ၏တရားမျှတသောဂိမ်းမှကြိုဆိုပါသည်။, မီးစိမ်း. ဒီဂိမ်းကိုအနိုင်ရတဲ့သူက ငွေသားဆုတွေ အများကြီးရလိမ့်မယ်။. Squid Challenge ကိုကစားခြင်းသည် ရှင်သန်ပြီး ငွေကိုအနိုင်ရရန် တစ်ခုတည်းသောအခွင့်အရေးဖြစ်သည်ကို မကြာမီ သင်သဘောပေါက်လိုက်ပါသည်။, မျက်နှာပြင်လှုပ်ရှားမှုကို နှိပ်ပြီး ဖိထားပါ သို့မဟုတ် နှိပ်ပါ… ပိုပြီးဖတ်ပါ »
အမျိုးအစား: cheat နှင့် Hack သို့မဟုတ်သိကောင်းစရာများ အမှတ်အသားများ (Tags): စိန်ခေါ်တယ်, မင်္ဂလာပါ, ဂိမ်း, ရေဘဝဲ
စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ survival ဂိမ်းမှာ ပါဝင်လိုက်ပါ။ အသက် သို့မဟုတ် သေခြင်းအတွက် ဒုတိယအကြိမ်အခွင့်အရေးရဖို့ ဘယ်လောက်ဝေးသွားမလဲ။? ပြေးပြီး အချိန်မီရပ်ပါ။, အနီရောင်မျဉ်းအတွင်း ရွှေ့လျှင်, Survival Game သည် စခရင်လှုပ်ရှားမှုကို နှိပ်၍ ဖိထားပါ သို့မဟုတ် မျက်နှာပြင်လှုပ်ရှားမှုကို နှိပ်ပါ။, လုပ်ဆောင်ချက်က ရိုးရှင်းပါတယ်။, သင်စူးစမ်းရန်လိုအပ်သည်။!… ပိုပြီးဖတ်ပါ »
အမျိုးအစား: cheat နှင့် Hack သို့မဟုတ်သိကောင်းစရာများ အမှတ်အသားများ (Tags): စိန်ခေါ်တယ်, မင်္ဂလာပါ, ဂိမ်း, Stick